तिव्वतियनको नेपालमा व्यवसायीक घोडा पालन, चीनले स्वदेश फर्कन दिएन (भिडियो सहित) – Tufan Media News
तिव्वतियनको नेपालमा व्यवसायीक घोडा पालन, चीनले स्वदेश फर्कन दिएन (भिडियो सहित)
२ माघ २०७७, शुक्रबार ०९:२२
चितवन ।विगत लामो समयदेखि नेपालमा तिव्वतीयन नागरीकहरुको पनि बसोबास रहेको छ । चीनले तिव्वतलाई आप्mनो नियन्त्रणमा लिएसँगै केहि तिव्वतियन नागरीकहरु नेपाल आएका थिए । त्यसपछि उनिहरु निरन्तर रुपमा नेपालमै बसीरहेका छन ।
बागलुङको ढोरपाटनमा बस्दै आएका तिव्वतीयन नागरीक सोनाम लामा नेपालमै जन्मिए । उनले आप्mनो देश चिन तिव्वतमा पाइला पनि टेकेका छैनन ।सोनाम अहिले ढोरपाटनमै घर छ । उमेरले ४८ पुगेका उनि परिवारसहित खेतिकिसानी गरेर बसीरहेका छन । सोनामले ११ वटा घोडा पनि पालेका छन । बाउबाजेको पालादेखि पाल्दै आएको घोडा अहिले पनि निरन्तरता दिइरहेका छन ।
आज उनिसँग घोडा पाल्न के कस्ता चुनौति छन ? के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? कति पर्छ लगायतका व्यवसायीक घोडा पालन र सरणार्थी बनेर बस्दाका दुख सुखबारे अन्तरंग कुराकानी गरेका छौँ । भिडियो पुरा हेरेर प्रतिकृया दिनुहोला,,